လိုင်းပေါ်က ကောင်မလေးက တောင်ကြီး မီးပုံးပြန်ပွဲ ကို ခေါ်လို့ သွားခဲ့ပေမယ့် ရှောင်နေခဲ့လို့ သေတမ်းစာရေးပြီး သေပွဲဝင်ခဲ့သူ – Swel Sone News
အခစြျဆိုတာ ဆနျးကွယျပါတယျ….အခစြျအတှကျ ဘာမဆိုလုပျရဲပွီး နောကျဆုံး အသကျပါပေးရဲတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ…. ခုလညျးပဲ အခစြျအတှကျနဲ့ အသကျပေးခဲ့ရတဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျရဲ့ ဝမျးနညျးကွကှေဲစရာ အဖွဈအပကြျလေးပါ…အံ့သွစရာကောငျးတာက သူအသကျပေးခစြျခဲ့ရတဲ့ ကောငျမလေးက အပွငျမှာတှေ့လို့ ခစြျကွိုကျခဲ့တာ မဟုတျဘဲ အငျတာနကျပေါျက တဈဆငျ့ခစြျကွိုကျပွီး ကောငျမလေးခေါျလို့ တောငျကွီးတနျဆောငျတိုငျသှားရာကနေ အသကျပေးခဲ့ရတာပါပဲ…..
အဲဒီကွကှေဲဝမျးနညျးဖှယျအကွောငျးလေးကို မိနျးကလေးတဈယောကျက လူမှုကှနျရကျပေါျစတငျလိုကျရာကနေ လူသိမြားပွီး သတေမျးစာရေးပွီး သဆေုံးသှားခဲ့ရတဲ့ ကောငျလေးအပေါျ ကရုဏာသကျခဲ့ကွပါတယျ…ခုခတျေက အငျတာနကျ ခတျေဆိုတော့ အငျတာနကျအသုံးပွုနတေဲ့ ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဆငျခွငျသုံးသပျနိုငျဖို့ ဒီအကွောငျးအရာလေးကို အောကျမှာ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျတယျနောျ …
“သူဘယျမှာနလေဲ ဘယျကလာလဲမသိဘူးရှငျ့… ကားဂိတျမှာ လဲနလေို့ အိမျခေါျလာတာပါ… နမေကောငျး လို့ ဆေးရုံပို့ပေးတယျ… တကျနိုငျသလောကျ အပေါငျးသငျးတှနေဲ့ပွုစုပေးတယျ …မနကျကိုးနာရီလောကျကတြော့ မသကျသာလို့ ပွနျပွပေးတယျ…
ဆေးရုံတငျရမယျပွောတော့ ကိုလဲဒီလိုဖွဈမယျမထငျလို့ ဘယျကမှနျးတော့မသိဘူးဆရာရယျ …. သူ့ကိုသကျသာအောငျဆေးလေးထိုးပေးပါလား…. သကျသာရငျ လမျးစရိတျလေး အလှူခံပီးပွနျလှှတျမယျပေါ့ပွနျခေါျလာတယျ…
နောကျဆုံးမသကျသာတော့ ပရဟိတအဖှဲ့နဲ့ဆကျပီး ဆေးရုံတငျတယျ …တဈခြို့ကကြှနျမကိုတရားခံ စဈသလို တှေ မေးလာတယျ ……နှလုံးရောဂါလား အမောဆို့တာလား အစာဘဲပွတျတာလား ရငျကှဲနာကတြာလားဆိုတာတော့…. ဟုတျကဲ့ ကြှနျမဆရာဝနျမဟုတျဘူးရှငျ့ အဲ့ဒါကွောငျ့ဆေးရုံပို့ပေးတာပါနောျ….
ခုလိုတငျတာလဲ သူ့မိသားစုနဲ့အဆကျသှယျလေးမြားရမလားလို့ ပီးတော့ ခေါျလိုကျတဲ့ကောငျမသိစခေငြျလို့ပါ…. ကြှနျမနဲ့မဆိုငျပါဘူး ကိုနဲ့မသိတဲ့လူတဈယောကျကို လူသားခငြျးစာနာလို့ကူညီပေးတာပါ….
ဒါပမေယျ့ကိုဖွိုးလေးရေ ရှငျ့ကို အောျလိုကျတဲ့အတှကျစိတျထဲမှာ မကောငျးဘူး ….မိနျးမတဈယောကျအတှကျနဲ့ ဘဝပကြျခံပီးလိုကျလာတဲ့ရှငျ့ကို ကိုယျ့မောငျလေးလို ဂရုနာဒေါသနဲ့အောျလိုကျတာပါ …နငျစဉျးစားဉာဏျ မရှိဘူးလား… ဦးနှောကျမရှိဘူးလားလို့ပွောလိုကျမိတယျ …မကွီးရယျ ကြှနျတော့ကိုအောျလိုကျတာဗြာတဲ့ ..တကယျစိတျမကောငျးဘူး ကိုဖွိုးလေးရေ…
ဒါတှကေ သူ့ဆီက တှေ့ရတဲ့ ပစ်စညျးတှပေါ. . .သူ့ကောငျမလေးအတှကျ နားကပျလုပျလာတယျလို့ ထငျပါတယျ….
ဒါက သူ့ရဲ့ အှနျလိုငျးပေါျက ခစြျသူပါ. . . အဲ့ဒီမိနျးမကလိုငျးပေါျမှာတှေ့လို့သူ့ကို လာခဲ့ပါဆိုပွီးခေါျလိုကျတာ… ဒီရောကျတော့ရှေောငျနတေယျ ….ကောငျလေးက ဘယျမှမသှားတကျတော့ လမျး မှာလဲနတောနဲ့
အမတို့ကခေါျပီး ဆေးရုံပို့ထားတာ.. ဒီမနကျဆုံးသှားပါပွီ….
ဒါက နောကျဆုံး သူရေးခဲ့တဲ့ စာလေးပါ. . .
မိနျးမတဈယောကျကို ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျယုံကွညျရတာလဲ မောငျလေးရယျ. . .ပွီးတော့ အခစြျအတှကျနဲ့ အသကျသရေတာတော့ မတနျဘူးလို့ ပွောခငြျတယျ…
ခုတော့ ကိုဖွိုးလေးဟာ ၇ ရကျ ၁၁ လ ၂၀၁၉ စပျစံထှနျးဆေးရုံတှငျကှယျလှနျသှားပါသညျ ….မိဘ ညီကိုမောငျနှမမြားအားမသိရပါ… ကြေးဇူးပွု၍ share ပေးကွပါ….” လို့ ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…
အခစြျအတှကျနဲ့ အသကျပေးခဲ့ရတဲ့ ညီလေးတဈယောကျရဲ့ ခစြျခွငျးကတော့ တကယျ့ကို လေးစားလောကျပါတယျ….ကရုဏာလညျးသကျရပါတယျ…လကျရှိမှာတော့ သဆေုံးသှားတဲ့ ညီလေးရဲ့ ဆှမြေိုးသားခငြျးတှကေို မသိရသေးတော့ …ဆှမြေိုးသားခငြျးတှေ သိအောငျမွငျအောငျ ဝိုငျးဝနျး Share ပေးလိုကျကွပါအုံး….
သရုပ္ေဆာင္လင္းလက္ဟိန္းရဲ႕ ရမ္းကားမႈအေၾကာင္းေျပာျပလာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးဝင္းေဇာ္ဦး